सामग्रीसँग तपाइँको प्रतिस्पर्धा मार्न5तरिकाहरू Martech Zone
सामग्रीको साथ तपाईंको प्रतिस्पर्धालाई मार्ने5तरिकाहरू
मङ्गलबार, डिसेम्बर 28, 2010 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
कसैले सोधे Quora यदि तिनीहरूको ब्लगले बगैंचा क्षेत्रको अत्यधिक भीडभाड खण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछ। प्रश्नको उत्तर त्यहाँ राम्रो थियो ... म तपाईं सबैलाई मेरो उत्तर साझा गर्न चाहान्छु।
पक्कै तिनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्! ठूलो सामग्री ठाँउमा सँधै बढ्नेछ, ठाउँ कतै भीडभाड जस्तो भए पनि। तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्:
छिटो हुनुहोस् - यदि तपाई पहिलो साइट वा ब्लग हुनुहुन्छ जुन बारम्बार बिषयवस्तु लिन्छ, तपाईले अरु धेरै पाउनुहुनेछ।
शीर्षमा रहनुहोस् - खोजी र तपाईंको सामग्रीमा यसको प्रभावलाई बुझ्दै तपाईंलाई खोजी इञ्जिन ट्राफिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सामाजिक हुनुहोस् - तपाइँको ब्लग प्रबर्धित गर्न सोशल मिडिया को उपयोग गर्नुहोस् र तपाइँको ब्लगमा सामाजिक मिडिया एकीकृत गर्नुहोस् ताकि अरुहरु तपाईका लागि बृद्धि गर्न सक्नेछन्। साझा गर्ने बटन, रिट्वीट बटन र ट्विटर, फेसबुक र लिंक्डइनमा घोषणाहरू एक जरूरी हो।
उल्लेखनीय हुनुहोस् - जब तपाइँको ब्लगमा कुरा गर्न को लागी हुन्छ, मान्छेहरु कुरा गर्नेछन् र बढि मानिसहरु आउनेछन्।
लगातार हुनुहोस् - सामग्री लेखन र बढ्दो पाठकलाई गति र नियमितता चाहिन्छ। नसोच्नुहोस् एक महान पोष्टले तपाईंको लागि यो भइरहेको छ ... हरेक पोष्टले मूल्य वृद्धि गर्दछ।
उत्कृष्ट सामग्री सँधै शीर्षमा बबल हुनेछ ... र तपाइँको सामग्रीको प्रमोट गर्न र यसलाई सजिलै फेला पार्न योग्य बनाउन सबै उपकरणहरू पूर्णरूपमा लाभदायक हुन्छ बिल्कुल कुञ्जी हुन्छ।
टैग: विश्लेषणबिलबोर्ड छलव्यवसाय परिणाममार्केटिंग पाइलटखोज सम्मेलनहरू
हामी केवल मूल्य उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छौं
WordPress मा अटोप्टेस असफल? FTP असफल?
ठूलो मद्दत बिल
डिसेम्बर १, २०१ 29 2010:२:1 अपराह्न
म ती points विन्दुहरूसँग सायद धेरै सहमत हुन सक्दिनँ। सरल, तर सजिलो छैन। त्यो मात्र मेरो पछि लाग्ने धक्का हो। ती सबै Do कार्यहरू गर्न गम्भीर लगानीको आवश्यकता पर्दछ। धेरै जसो सूचीमा केवल महत्त्वपूर्ण समयको लगानी संलग्न हुन्छ (यो उचित छैन भनेर भन्दैन), तर #aफरक प्रकारको हो। "उल्लेखनीय हुनु" केवल आउँदैन किनभने तपाईं अधिक समय लगानी गर्नुहुन्छ, यद्यपि एकरूप हुन, एक ले मान्न सक्छ, सांख्यिकीय रूपमा उल्लेखनीय केहि उत्पादन गर्न को बाधा बढ्छ। म एउटा अनुमान लगाउन चाहन्छु कि तपाईं, डग, "उल्लेखनीय हुनुको" बढी उद्देश्यपूर्ण समझको लागि केस गर्न सक्नुहुन्छ।
र मैले झूट बोले, मसँग अर्को धक्का पनि छ।
कहिलेकाँही उत्तम सामग्री शीर्षमा उठ्छ। अधिकांश भागको लागि, एक जानबूझकर प्रचार वा मार्केटिंग रणनीति बिना, ग्रेट सामग्री अस्पष्टता र खोज ईन्जिन अदृश्यताको जीवनमा छ। दिमागमा मैले तपाईंको पोस्टको लागि केही फरक आधारहरूको सुझाव दिनेछु। महान प्रयासले कसैलाई भीड अनलाइन बजार (विचार वा उत्पादनहरू) मा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिनेछ। महान सामग्री यसलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ।
डिसे 30, 2010 मा 11: 33 AM
म बढी सहमत गर्न सक्दिन! महान् सामग्री तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरूको लागि साँच्चिकै ठूलो सम्पत्ति हुन सक्छ। एकचोटि यो लेखिसकेपछि, तपाईं यसलाई पुन: साइकल गर्नका लागि सबै च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ र अनलाईन अन्तरिक्षमा घुमफिर गर्नुहोस्।
उत्कृष्ट पोष्ट डग! म ठूलो मद्दत बिलसँग सहमत छु - कुनै प्रकारको स strategy्लग्नता रणनीति बिना, सामग्री बस फेला पर्खि बसेको छ। उत्तम खरीदले यसलाई नयाँ तहमा पुर्‍याएको छ, यो कथा विज्ञापन आयुबाट हेर्नुहोस्: http://adage.com/article?article_id=147956
सबै अद्भुत डग को लागी धन्यवाद, हामीले चाँडै नै पक्राउ गर्नु पर्छ!
राष्ट्रपति / सीईओ